काठमाण्डौमा एक तले घर लगाउन के कति खर्च लाग्छ, हेर्नुहोस सम्पूर्ण खर्चको बिबरणसहित - Mitho Khabar
काठमाण्डौमा एक तले घर लगाउन के कति खर्च लाग्छ, हेर्नुहोस सम्पूर्ण खर्चको बिबरणसहित
June 27, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on काठमाण्डौमा एक तले घर लगाउन के कति खर्च लाग्छ, हेर्नुहोस सम्पूर्ण खर्चको बिबरणसहित
सबैको सपना हुन्छ, राजधानी काठमाडौंमा घर बनाउने । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र कति तलाको घर बनाउन कति लगानी लाग्छ ? त्यसबारे भने प्रायः सबै बेखबर हुने गरेका छन् । घरको अनुमानित लागतबारे सम्बन्धित क्षेत्रका इन्जिनियरसँग जानकारी लिँदा राम्रो हुन्छ । लगानीको आंकलन गरेरै आफ्नो आर्थिक क्षमताले भ्याउने घर निर्माण गर्नु उक्तम हुन्छ ।
के तपाईं काठमाडौंमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? निर्माण सुरु गर्नुअघि तपाईंले अनुमानित बजेट जोहो गर्नु आवश्यक हुन्छ । आफूसँग कति रकम छ, अपुग रकम बैंकबाट ऋण लिने हो कि आफन्तसँग सरसापट माग्ने हो, त्यो निक्र्योल गर्नैपर्छ ।
हामीले तपाईंहरूलाई काठमाडौं उपत्यकामा मध्यम खालको एक तला घर निर्माणका लागि कति रकम खर्च हुन्छ भनेर जानकारी गराउँदै छौं ।
चार आना क्षेत्रफलको घडेरीमा करिब १ हजार स्क्वायर फिटमा फैलिएको एक तलाको चारकोठे घर बनाउन कति लगानी लाग्छ ? स्ट्रक्चर डिजाइन एन्ड सर्भिसेजका प्रोजेक्ट म्यानेजर रमेश फुयाल भन्छन्, ‘मध्यमस्तरको घर बनाउँदा प्रतिस्क्वायर फिट ३२ सय रुपैयाँ हाराहारी लागत पर्न आउँछ । यो भनेको करिब ३२ लाख रुपैयाँमा एक तले घर तयार हुने भयो ।’
घरलाई जति भव्य बनाउन खोज्यो, लागत पनि उति नै बढ्दै जान्छ । मध्यमभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको घर बनाउन प्रतिस्क्वायर फिट लागत ४ हजार रुपैयाँ पर्छ । अझ राम्रो बंगला बनाउँदा ४५ सय प्रतिस्क्वायर फिट लगानी पर्न आउँछ ।
तीन आना (करिब १ हजार स्क्वायर फिट) जग्गामा प्रतिस्क्वायर फिट ४ हजारको दरले एक तला घर ठड्याउन ४०/४२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । यदि बंगालो किसिमको अलि लक्जरी घर बनाउन खोजे प्रतिस्क्वायर फिट ४५ सयका दरले एक तलाको ४५ लाख रुपैयाँ लगानी लाग्ने भयो ।
कस्तो घर बनाउने ? यो तपाईंकै छनोट हो । तपाईंले आफ्नो आयस्रोत हेरेर कस्तो घर बनाउने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ ।
सामान्यतयाः ४ आना जग्गामा घर ठड्याउने भनेको करिब एक हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफलको हो । फुयालका अनुसार यो क्षेत्रफलमा ११ फिट बाई १३ फिटका तीन वटा कोठा, १३ फिट बाई १५ फिटको लिभिङ रुम र ७ फिट बाई ५ फिटको एउटा बाथरुम तयार हुन्छ ।
डेभलपर कम्पनीले ३२ लाख रुपैयाँमा एक तलाको घर बनाएर घरधनीलाई चाँबी बुझाउन सक्छन् । यदि आफैले घर बनाउन कस्सिए एक/दुई लाख रुपैयाँ कम पनि पर्न सक्छ । डेभपलपरले आफ्नो खर्च पनि जोडेकै हुन्छ ।
कस्तो अचम्म ४१ वर्ष जंगलमा बसेका उनलाई संसारमा महिला छन् भन्ने पनि थाहा थिएन